सहकर्मी भन्दै छाला तार्छन् राजनीतिमा । आफ्नै बाउ छोरा पनि मार्छन् राजनीतिमा ।। साम र दाम दण्ड भेद नीति क्रूर यसको । मौका पर्दा उचाल्नेले झार्छन् राजनीतिमा ।। भोट दियो य..
अस्पतालको सगाल पलङमा सेतो सुकिलो ओच्छ्यान पाई नयाँ रोगी रम्दछ पहिले खोल र तन्ना सुम्सुम्याई अहा १ कस्तो सफा विच्छौना, हातको मयल पनि सर्ला जस्तो कति नरम औ कति मनोरम खोपी..
– चुप लागेर बस कहिलेकाहीँ चुप लागेर बस्न पनि सिक्नु पर्छ घण्टीले जस्तै काँडामाथिको शीतको थोपाले जस्तै पुसे-घाममा हाँसिरहेको या माघे-झरीमा नुहाईरहेको फूलले जस्तै जब दुःख..
नाङ्गिदै छन्, हिउँको अभावमा हिमालहरू । लोप हुँदैछ सौन्दर्य पहाडको नपाई स्नेह । मख्ख पर्दैछन् लहरको स्पर्शमा किनाराहरू । खोज्दैछन् वास्ना कागजको फूलमा अल्लारेहरू । को सु..
१. दिएको छु पास होला नहोला जिन्दगीमा ठूलो प्रगती खास होला नहोला अब दिने परीक्षामा मेरो दिमागको , शंका लाग्छ बास्तविक जाँच होला नहोला ।। २. म त जिन्दगीदेखि हार खाएको मान..
युवा लेखक संगिता श्रेष्ठको पुस्तक कथामा अल्झिएका प्रेम बजारमा आएको छ । पुस्तकको पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले, पश्लिकेशन नेपालयमा शनीबार बिमोचन गरेकी हुन् । पाँच दर..
एकापट्टी फुक्यो अर्कोतिर धुवाँ निस्किन्छ, त्यही धुँवामा जमेको मान्छेको जीवन सिद्धिन्छ । सोतेजस्तो अर्कैको आडमा उभिने यो जीवन, के छ र ? चिलिम जस्तै पड्किने यो जीवन, सत्र बर्षे तरुनीको आँखा सन्कियो, असी बर्षे बूढाको मुटु थर्कियो । यस्तो जाबो पिरती कहिल्यै गाढा हुन्छ ? दुई दिने माया पिरती चिलिम फर्कियो । चिलिम जस्तै दुईतिर [&helli..
अथःपञ्चमोध्याय : कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्यमुनी, जब ज्ञानेन्द्र गएपपछि नेपाल सरकार परिवर्तन भइरह्यो, कहिले गिरीजाप्रसाद, कहिले प्रचण्ड, कहिले माधव कु. नेपाल, तिनै दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री बनेर पनि संविधान नबनेपछि सबै जनताले भने बमोजिम नयाँ मान्छेलाई, पढेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री दिउँ भन्न थाले । यता संसदमा भेडाबाख्रा..
प्रथमोध्याय : कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ । हे अगस्त्यमुनी, नयाँ नेपालको सृष्टीदेखी अन्त्यसम्म के के कार्यहरु भए सबै सुन । पृथ्वी नारायण शाहले बाइसे र चौबिसे राज्यहरुलाई एकीकरण गरेर एउटा सिंगो रुप पाएको नेपाललाई धेरै मुलुकहरुले आँखा लगाए । वहादुर शाह, भिमसेन थापा बलभद्र कुँवर अमरसिंह थापा र भक्ती थापाको टिमले बल्ल बल्ल पराजित गरे ।..
मलाई गर्ब छ आफु पनी नेपाली भएर यही मधेस यही पहाड र हिमाली भएर प्यारो लाग्छ हुर्किएको जन्मथलो सधै असल छिमेक र उकाली ओराली भएर । रूप रंग जातभात हुन्न भन्छन् साथीहरु मन पराउने जीवन साथी काली भएर कति पर्खाउ उनलाई नाकाबन्दी छ भन्दै ऊ रिसाउँदै थियो सिउँदो खाली भएर । कहिलै निर्धक्क जिउने आँट […]
लेखक ब्रजेश खनालको दोस्रो उपन्यास जुनेली गएको शनीबार सार्वजनिक भयो । बुकहिल पब्लिकेशनले प्रकाशन गरेको उनको उपन्यास जुनेलीलाई लिएर अहिले मिश्रीत प्रतिक्रिया आईरहेको छ । उपन्यासमा प्रयोग भएका भाषा अश्लिल भएको भन्दै कतिपयले यसको आलोचना गरेका हुन् । कतिपयले भने, उपन्यास समाजको ऐना भएको र पात्रलाई न्याय दिन ती भाषाको प्रयोग सही भएको ..
कान्छीको बुलाकी मागेर एकैछिन कवितालाई सिङ्गार्ने मेरो रहर कति सुहाउँथ्यो होला ? तर, कान्छीले बुलाकी नै पो हराइछिन् । याद दुखेर आउँछ– सप्तमी, रविबजार धान नाच्दा कान्छीको बुलाकी पनि नाचेको जाँड छान्दा छपनी छक्छकाउँदा कान्छीको झुम्के बुलाकी हाय । टोड्के–कुसुण्डको उकालोमा त्यो रमिते डाँडा बाँझो गाउँको एक्ले वर कठै कान्छीको झुम्के बु..
बाबु माग्ने, आमा माग्ने, छोराछोरी माग्ने, दिन चाहीँ कसले दिने सबैजना माग्ने । कोही बटुका थाप्दै, कोही पटुका थाप्दै, दिए उसको गुणगान गाउने, नदिए हिँड्ने सराप्दै । मन्दिर जाने भगवानसँग माग्ने, भगवानले नदिए भक्तजनसँग माग्ने । सय पचास दिए भक्तजनलाई जुस खुवाउने, एक दुई रुप्पे दिए बङ्गारा खुस्काउने । सदनमा जाने दाँत ङिच्याएर माग्ने, न..
आउने बिहीबार फ्याक्ट्स अफ नेपाल (नेपालका तथ्यहरु) भाग दुईको बिमोचन हुने भएको छ । बिमोचन बिहीबार बिहान साढे एघार बजे मुड्स लंग त्रिपुरेस्वरमा हुने भएको हो । बिमोचनमा अर्थ क्षेत्रका बिज्ञहरु अनिल केशरी शाह, सुमनराज अर्याल र डा स्वर्णिम वाग्लेले तथ्याङ्क, सूचना र यसको विश्लेषणबारे छलफल गर्नेछन् । फ्याक्ट्स अफ नेपाल फ्याक्टस रिसर्..